फागुन २४, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ, २४ फाल्गुन:- आज ८ मार्चको दिन तपाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। अहिले सम्म केही मानिसहरुलाई म्यासेज पनि पठाईसक्नु भयो होला या खास मान्छेलाई फोन गरेर बधाई पनि दिईसक्नुभयो होला।
तर के तपाईलाई थाहा छ आखिर किन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ र यो मनाउन कहिलेबाट सुरु भयो ? के यो वास्तवमै कुनै उत्सव हो त ?
वर्षौं अघि बाट संसारभरिका महिलाहरु आजकै दिन महिला दिवस मनाउदै आईरहेका छन् तर यो कसरी सुरु भयो ?
वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मजदूर आन्दोलनको उपज हो। यसको बीजारोपण सन् १९०८ मा भएको थियो जब १५ हजार महिलाहरुले न्युयोर्क शहरमा मार्च निकालेर काममा समयावधी कम गर्न माग गरेका थिए।
यसबाहेक उनीहरुले उचित पारिश्रमिक र मताधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। एक वर्ष पछि अमेरिकी समाजवादी पार्टीले उक्त दिनलाई राष्ट्रिय नारी दिवस घोषित गरे।
यो विचार एक महिलाको थियो। क्लारा जेटकिनले सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा कामकाजी महिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुझाव दिईन। त्यस समयमा सम्मेलनमा १७ देशहरुका १०० महिलाहर्रु उपस्थित थिए। ती सबैले यस सुझावलाई समर्थन गरे।
सबैभन्दा पहिले सन् १९११ मा अस्ट्रिया , डेनमार्क, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाईएको थियो। प्राविधिक रुपमा यो वर्ष हामी १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउदैछु।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा नारी दिवसलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गरी वार्षिक रुपमा एक थिमको साथ मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पहिलो थिम ‘विगतको उत्सव मनाउने, भविष्यको लागि योजना बनाउने’ अर्थात ‘सेलिब्रेटिङ्ग द पास्ट, प्लानिंग फर द फ्यूचर’ थियो।
तपाईको दिमागमा यो सवाल आइरहेको होला कि आखिर ८ मार्चको दिन नै किन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ ? वास्तवमा क्लारा जेटकिनले महिला दिवस मनाउनको लागि कुनै तारिख पक्का गरेकी थिईनन।
सन् १९१७ मा युद्धको समयमा रुसका महिलाहरुले ‘ब्रेड एण्ड पिस'(यानि खाना र शान्ति) को माग गरे। महिलाहरुको हड्तालले तत्कालीन सम्राट निकोलस पद छोड्न बाध्य भए र अन्तरिम सरकारले महिलाहरुलाई मताधिकार दियो ।
त्यस समय रुसमा जुलियन पात्रोको प्रयोग हुन्थ्यो। जुन दिन महिलाहरुले उक्त हड्ताल गरे, त्यो दिन २३ फेब्रुअरी परेको थियो। ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा उक्त दिन ८ मार्च थियो र त्यसै समय पछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चको दिन मनाउन सुरु गरिएको थियो।
के कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवस पनि छ ?
बिल्कुल, अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवस हरेक वर्ष नोभेम्बर १९ को दिन मनाइन्छ। यो दिवस सन् १९९० बाट मनाउन सुरु गरिएको हो तर यसलाई अहिले सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक मान्यता मिलेको छैन।
६० भन्दा बढी देशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरूष दिवस मनाइन्छ। यसको उद्देश्य पुरुषहरुको स्वास्थ्य, लैङ्गिक सम्बन्ध, लैङ्गिक समानताको बढवा दिनु र त्यस विषयमा सकारात्मकता बढाउनु हो। सन् २०१७ को यसको थिम ‘सेलिब्रेट मेन एण्ड ब्वाइज’ थियो।
यस दिन धेरै देशहरुमा राष्ट्रिय अवकाशको घोषणा गरिन्छ। रुस र अन्य दोस्रो देशहरुमा यस दिन फूलको मूल्य आकासिने गर्छ। यस समयमा महिला र पुरुषले एक-अर्कालाई फूल दिन्छन।
बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २४, २०७४१५:२८
केटीहरु चप्पल हातमा लिएर रुँदै भागिरहेका थिए…………….